Nzira yekukunda kutya kwekufa ▷ ➡️ Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
Maitiro ekukurira kutya kwerufu
6 Kuverenga Min
Maitiro ekukurira kutya kwe rufu. Kana paine chokwadi chisingakanganwike pasi redu, ndizvozvo rimwe zuva tichafa. Rufu ndi zvakasikwa chokwadi kuti isu tese tinopfuura. Nekudaro, kubva pazera diki kwazvo, nzanga yakaisa mukati medu kutya kwakanyanya kwerufu, ndosaka hwave kutya kugona kukuremadza.
Zviripachena, hapana munhu anoda kufa. Hupenyu chipo kuti zvese nyika inoda kusvina zvakanyanya, uye nekuda kwechikonzero ichi zvinonetsa kuti tifunge kuti rimwe zuva ticharega kunakirwa. Asi izvi hazvireve kuti tinofanira kurarama tichitya.
La Bhaibheri rinotidzidzisa kuti kufa hakusi iko kugumal. Zvakare, sezvo Jesu akapa hupenyu hwake nekuda kwedu, isu tine tariro yekurarama hupenyu husingaperi naye.
Tevere isu ticha tsanangura kukunda sei kutya rufu. Asi usati watanga, unofanirwa kunzwisisa kuti chii chinonzi kufa maererano nebhaibheri.
1 Maitiro ekukurira kutya kwerufu zvinoenderana nebhaibheri
1.1 Chii chinonzi kufa maererano nebhaibheri
1.2 Chii chakaipa kupfuura rufu
2 Maitiro ekukurira kutya kwerufu mumatanho mana
2.1 1. Wana hupenyu husingaperi kuburikidza naJesu
2.2 2. Tora kuti unofanira kufa kuti urarame nekusingaperi
2.3 3. Ipa hupenyu hwako kuna Jesu
2.4 Kumbira Mwari kuti abvise kutya kwako
2.5 5. Tsvaga zvinotaurwa neBhaibheri nezvekutya kwako
Maitiro ekukurira kutya kwerufu zvinoenderana nebhaibheri
Zvemukristu, Rufu haungori chiitiko chemuzvarirwo uye chemuzvarirwo chatinofanira kupfuura tese pasina kuregererwa. Munhu anotenda muna Mwari uye achitenda kuti Bhaibheri rakafemerwa naIye anofanira kuziva izvozvo rufu rune chirevo chakasiyana zvachose kuti nyika izive.
Chii chinonzi kufa maererano nebhaibheri
Zvinoenderana neBhaibheri, rufu rwakauya nekuda kwechivi chakatiparadzanisa naMwari. Tinofanira kuziva kuti Ndiye tsime rehupenyu hwese. Kana isu tikapandukira kushoko rake uye nekuda kwake, tinozvisiya kure nezvose zvaanomiririra uye, nekudaro, tinofamba kubva pahupenyu husingaperi.
Patinosarudza rarama nzira yedu tichiregeredza zvakataurwa naIshe uye kusarudza nzira dzisiri idzo dzaakatiratidza, zvinoreva kuti tinorasikirwa nechainomiririra. Naizvozvo, isu tinosarudza nzira uko hupenyu husipo.
Toga hatigone kuita chero chinhu nezve hupenyu (kupi kana nguva yekuzvarwa, kurebesa hupenyu kana kudzivirira kumagumo). Iko hakuna simba matiri rekuzvidzora. Munhu, kunyangwe uine vakasunungurwa, haina kuzvigutsa: zvese isu tinovimba nehupenyu hunobva kuna Mwari. Mupfungwa iyi, hatigone kuzvinunura kubva kurufu.
Chii chakaipa kupfuura rufu
Chimwe chechokwadi chikuru icho isu tese chatinofanira kuve nacho muhupenyu ndechekuti rimwe zuva tichafa uye vanhu vatinoda vachafa, uye kunyangwe isu tisingade kutaura nezvenyaya iyi, ndeyechokwadi kune wese munhu.
Nezuva rega rega rinopfuura, maseru anokwegura uye anomutsiridzwa. Isu tese tiri pasi pekurwara nekukasira kana zvikwaniso zvinomuka pamusoro pemakore.
Neichi chokwadi mupfungwa, vanhu vazhinji vanotarisira kufa nekuchembera uye kunakidzwa nehutano nekujeka kwepfungwa kwenguva yakareba sezvazvinogona. Nekudaro, vazhinji vechidiki nevana vanofa mazuva ese kubva kuzvirwere zvinosiririsa, mhirizhonga kana zvikonzero zvakasikwa.
Zvisinei, kune chimwe chinhu chakaipisisa kupfuura rufu, uye kuri kufa kwemweya.
Munhu anogona uve nehupenyu hupfupi asi hunofadza padyo naMwari. Pane kupesana, panogona kunge paine munhu akadaro hupenyu hwakareba, asi unosiririsa uchibva kuna Baba. Ndosaka zvakakosha kuti utevere nhanho idzo Mwari akatiratidza kuburikidza neBhaibheri, kuitira kuti mweya wedu utiratidze nzira yaachatipa. hupenyu husingaperi uye mufaro wakazara.
Maitiro ekukurira kutya kwerufu mumatanho mana
1. Wana hupenyu husingaperi kuburikidza naJesu
Mwari anoda kutipa hupenyu zvakare, hupenyu huzhinji husingagumi pano nekupera kwemazuva. Iyi ndiyo tariro yekusingaperi yakavhurwa naJesu Kristu. Akasimuka akakunda rufu! Avo vanotenda kunaIshe vanozovapawo kumuka kuupenyu husingaperi. Naizvozvo, hakuzovi nemhosva kune avo vari muna Kristu.
Mwari anotida uye haafariri kufa kweumwe munhu. Anotikokawo kuti tive nehupenyu husingaperi zvakare kuburikidza neMwanakomana wake Jesu Kristu.
Uyo une Mwanakomana une upenyu; uyo asina Mwanakomana waMwari haana upenyu.
1 Johani 5: 12
2. Tora kuti unofanira kufa kuti urarame nekusingaperi
Kufa nekutambura mhedzisiro yechivi chevanhu (huipi hwakazara). Tose tiri vatadzi uye tinokodzera kurangwa chete nekutendeuka kubva kuna Mwari. Asi iyo kufa hakusi kuguma. Patinofa, muviri unoputsika, asi mweya uchiripo. Mweya ndiwo hunhu hwedu, zvatiri.
Mushure mekufa tinogona kuva naMwari nekusingaperi (enda kudenga) kana kuparadzaniswa naye nekusingaperi (enda kugehena). Munhu wega wega anogona kusarudza zvekuita.
Jesu achazadzisa zvaakavimbisa muShoko rake. Ani naani anogashira nekutenda nyasha dzehupenyu husingaperi haazopihwa mhosva, asi achararama nekusingaperi naIshe.
Usashamiswa neizvi; Nekuti awa rinouya, apo vese vari mumakuva vachanzwa izwi rake.
uye avo vakaita zvakanaka vachamuka kumuka kweupenyu; asi avo vakaita zvakaipa, mukumuka kwekutongwa.
Johane 5: 28-29
Achapukuta misodzi yose kubva pameso ako. Hapachazove nerufu, nekusuwa, nekuchema, kana kurwadziwa, nekuti hurongwa hwekare hwanyangarika.
Zvakazarurwa 21: 4
3. Ipa hupenyu hwako kuna Jesu
Kune avo vasingatsvage Jesu, kutya rufu zvine musoro. Rufu runogona kutyisa. Asi Jesu vakauya kuzotinunura kubva murufu. Paakamutswa, Jesu akakunda rufu. Zvino rufu haruchisina simba.
Kune avo vane Jesu mumoyo yavo, rufu haruchisiri chikonzero chekutya. Kana tafa, tichava naMwari nokusingaperi, pasina kusuruvara kana kutambura. Kana usati wapa hupenyu hwako kuna Jesu, mumukoke agare mukati memwoyo wako nhasi. Jesu anokuda uye anoda kuva newe nekusingaperi.
Kumbira Mwari kuti abvise kutya kwako
Ukatya kufa taura namwari nezvazvo. Inogona kukubatsira kurarama pasina kutya. Mwari vane zvirongwa zvakanaka kwazvo zvehupenyu hwako uye zvakatonaka zvirongwa zvekusingaperi kwako.
Kuva nekumwe kutya kufa kuri kwomuzvarirwo uye kune hutano, sezvo kuchikuchengetedza mumamiriro ezvinhu ane njodzi. Zvisinei iyo kuwedzeredza kutya rufu anogona kukonzera kutya, kushushikana uye mamwe matambudziko mazhinji.
Mwari haadi kuti kutya kwerufu kukuvadza hupenyu hwakoNdiko kusaka akatuma Mwanakomana wake mumwechete akaberekwa kuti akuponese. Unofanira kukumbira Mwari uye kuvimba kuti Iye achakubatsira iwe kukunda kutya uku.
5. Tsvaga zvinotaurwa neBhaibheri nezvekutya kwako
La Bhaibheri rinotiudza nezve zvikonzero nei tichitya rufu. Kukunda kutya uku, zvakakosha kuti unzwisise uye utende muzvokwadi izvi.
Hezvino zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro penyaya iyi:
Iwe hauzive kuti kudenga kuchazovei, asi Mwari vanovimbisa kuti zvichave zvakanaka kwazvo. Mwari vari mukutonga uye vanokuda, He has the best for you.
Zvinhu izvo ziso risina kuona, kana nzeve zvayakanzwa,
Uye havana kukwira mumoyo wemunhu,
Izvo izvo izvo izvo Mwari akagadzirira avo vanomuda.
1 VaKorinde 2: 9
Kutya kurasikirwa nevadiwa vako
Mwari anoda wako mudiwa. Unogona kuvimba naye kuti anovachengeta.
Uye tinoziva kuti zvinhu zvese zvinoshanda pamwechete kuti zviitire zvakanaka kune avo vanoda Mwari, ndiko kuti, avo vakadaidzwa maererano nechinangwa chake.
VaRoma 8: 28
Mwari vakatendeka. Iye achakubatsira iwe mune chero mamiriro. Haumbofi wakakusiyaKwete kunyangwe mukutambura, kunyangwe mukufa. Zvichava newe nguva dzose.
Izvo zvandine chokwadi nazvo kuti kana rufu, kana hupenyu, kana vatumwa, kana masimba, kana masimba, kana zviripo, kana zvichauya.
Kureba kana kudzika kana chero chimwe chinhu chakasikwa chingatiparadzanise nerudo rwaMwari, rwuri muna Kristu Jesu Ishe wedu.
VaRoma 8: 38-39
Izvi ndizvo zvazviri! Isu tinovimba ichi chinyorwa chinokubatsira iwe kuziva maitiro ekukurira kutya kwerufu. Kana ikozvino iwe uchida kuziva kukurira kuora mwoyo maererano nebhaibheri, ramba uchivhura Ziva.online.
Mhando dzipi dzekutsanya dziripo muBhaibheri?
Maitiro ekukurira kuora moyo zvinoenderana nebhaibheri